Apple wuxuu xaddidayaa qaar ka mid ah emojisyada iyo ereyada ku xardhan xaragada shakhsi ahaaneed ee AirTag | Wararka IPhone
Angel Gonzalez | 21/04/2021 14:00 | Noticias, Alaabada Apple
Soo bandhigiddii alaabooyin iyo adeegyo cusub Apple-ka sanadka ayaa shalay ahayd waxaana si toos ah looga sii daayay soo bandhigid laga duubay Apple Park. Mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee xiddigaha muhiimka ah ayaa shaki la'aan ah AirTag, sumadaha tilmaamayaasha oo ku habboon shabakadda Raadinta. Qalabkan yar yar ayaan ku haysan doonaa wax kasta oo aan ka baqeyno inaan ku weyno qalabkeenna: furayaasha, jeebka, shandadaha ... Fursadaha aan dhammaadka lahayn. Markii aad ka iibsaneysid Apple Store, waa wax laga beddeli karaa iyadoo loo adeegsanayo a xardho laser caadadii. Si kastaba ha ahaatee, isku darka emoji iyo ereyada qaarkood Apple ayaa mamnuucday.
AirTag laser xardho qaar ka mid ah emoji iyo ereyo isku dhafan la mamnuucay
Dib u dir farriintaada la duubay. U sii taabasho shakhsi ahaaneed bilowgaaga, lambarkaaga nasiibka ah ama emoji aad jeceshahay.
Wiilasha iyo gabdhaha qarka u saaran Iyagu waa kuwii ugu horreeyey ee digniin siiyay. U qaabeynta aaladda AirTag waxaa laga mamnuucay qaar ka mid ah emoji iyo ereyo. Mid ka mid ah isku-darkaas ayaa ah midka aad ku aragto sawirka madaxa u ah maqaalka: faras ku xiga 'saxaro faraxsan'. Si kastaba ha noqotee, xayawaannada kale ee leh isla saxarada emoji lama mamnuuco. Midkoodna isku-darka 'permuted veto' laguma diidin iyadoo la dhigayo saxaro faraska ka hor.
Qaar kale oo ka mid ah ereyada la mamnuucay waa cay ama ereyo xun oo ilaa afar xaraf ah maxaa yeelay waa xuruufta ugu badan ee lagu ridi karo xardho shaqsiyeed. Qaar ka mid ah ereyadaas, tusaale ahaan 'fuck' ama 'dameer'. Way cadahay taas Apple waxay dooneysaa xardhashada leysarka si ay ugu shaqeyso AirTag, laakiin ma ogola in lagu daro waxyaabo cunsuriyad leh.
Si kastaba ha noqotee, tani ma dhacayso, ugu yaraan isku darka faraska iyo lo'da emoji, oo ku xardhan leysarka alaabta kale ee wax laga beddeli karo sida qalinka Apple. Waan arki doonaa haddii ay qalad tahay ama haddii Apple-ka Weyn uu isku dayo inuu ka fogaado noocyada isku-dhafka ah maxaa yeelay way noqon karaan kuwo weerar ah, in kastoo, marka hore, aysan u muuqan inay sidaas noqon karto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple wuxuu xaddidayaa qaar ka mid ah emojisyada iyo ereyada ku xardhan xayeysiinta shakhsi ahaaneed ee AirTag
AirTag: hawlgal, qaabeyn, xaddidnaanta ... wax kasta oo lagu sharraxay fiidiyow